Ubugcisa kunye nokuzonwabisa | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: UbuGcisa noLonwabo
Indlela yokudweba intaka? Izindlela eziliqela zabaculi bama-novice
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 18.09.2019
Umthi wecherry wentaka ubungakanani ubukhulu. Ngamanye amaxesha ifikelela kubude beemitha ezili-12. Ngokusisiseko intaka yetsheri ikhula kufutshane nonxweme lwamachibi kunye nemilambo. Ikwafumaneka nakumahlathi afumileyo. Iintyatyambo ...
Umdaniso weMazurka: imvelaphi kunye nenkcazo
Umdaniso weMazurka wabonakala ePoland. Apho ibizwa ngokwahlukileyo kancinci. Ibizwa ngokuba yi "Mazur". Lo mdaniso uyakhawuleza kwaye unamandla. Ilizwe lakhe nguMazovia, apho kuhlala khona abantu abazibiza ngokuba ziiMazura. ...
Aldanov, "Ibhulorho kaMtyholi". Isishwankathelo kunye neempawu zenoveli
Ukusukela kwimihla yoBukhosi, iRussia idume ngababhali bayo kunye neembongi. Imisebenzi engenakulinganiswa, eye yaba yeklasikhi kungekuphela kwilizwe lethu, kodwa kwihlabathi liphela, isivumela ukuba sizingce ngokufanelekileyo ngenkcubeko yethu ...
Khumbula i-rock eyaziwayo ye-rock 80-x
Ingxondorha yee- ibonakaliswe yinto yokuba iintlobo ezintsha zifezekisa impumelelo enkulu, kwaye izikhokelo zeminyaka edlulileyo ziyancipha kwimvelaphi. Iibhanti zerock ze-80s, ezenziwe ziimvumi ezisencinci kakhulu ngenxa yomnqweno wokuchaza ngokucacileyo malunga ...
Umlingisi uLyudmila Ivanova: i-biography, ubomi bomntu
ULyudmila Ivanova ngumdlali weqonga onobomi obufanele ukuhlonitshwa, umsebenzi wakhe waqala nzima kakhulu, kodwa woyisa yonke into kwaye wakufezekisa oko ebesoloko ezama ukusukela ebuntwaneni. Uzalelwe eMoscow ...
I-Actor Yevgeny Kindinov: biography, ubomi bomntu, isithombe
Evgeny Kindinov, iifoto ngoku phambi kwakho, ngamaxesha eSoviet wenza abafazi abaninzi ubunzima ngenxa yothando olungafunekiyo ngaye. Umdlali wayemhle kakhulu ebutsheni bakhe, kodwa wayethanda kuphela ...
Ukupeyinta okuthe tye. Itekhnoloji yokupeyinta kukaFlemish. Isikolo seFlemish sokupeyinta
Ubugcisa beklasikhi, ngokuchaseneyo neentshukumo zangoku ze-avant-garde, zihlala ziphumelela iintliziyo zabaphulaphuli. Olunye lweembonakalo eziqaqambileyo nezona zinamandla luhlala kuye nawuphina umntu ojamelene nomsebenzi wabazobi bamaDatshi bakwangoko. Flemish ...
Zingaphi ii-symphonies ezabhalwa nguTchaikovsky? Nokuba kungabikho nangaphantsi, kodwa ezisixhenxe. Yiyo yonke loo nto - ziqaqambile
UPyotr Ilyich Tchaikovsky - umqambi waseRussia wenkulungwane ye-XNUMX. Umculo wakhe ubonakaliswa ngombala, uthando kunye nobutyebi obungaqhelekanga bomculo. Enkosi ku-PI Tchaikovsky, ubugcisa bomculo baseRussia bafikelela kwiindawo eziphakamileyo kakhulu. Kwangaxeshanye…
Abadlali bebhanyabhanya "Ngokukhawuleza nangomsindo 7", okanye ukuba yenziwa njani imovie ngaphandle kukaPaul Walker
Abadlali bemidlalo bhanyabhanya ethi "Fast and Furious 7" kunye neqela leprojekthi ngoNovemba 2013 bothuswa kukuba umlingisi ophambili kwifranchise eyaziwayo, uPaul Walker, wasweleka engazange awugqibe umsebenzi ...
Mirage Group: imbali, discography, ifoto. Ukwakhiwa kweqela elidala
Kwinqaku lanamhlanje, siza kuqhelana neqela elalisaziwa ngokudala, elidalwe ngexesha le-USSR kwaye lalithandwa kakhulu kubuninzi belizwe lethu ngexesha lePerestroika. Eli liqela leMirage. I-Biography,…
Uthotho lwefilimu "Unyana woBawo weZizwe": abadlali kunye necebo
Ngo-2013, emva konyaka onesiqingatha wovavanyo, ukufota kunye nokuhlela, umsebenzi odibeneyo weenkosi ezivela eRashiya, eBelarus naseUkraine - umboniso bhanyabhanya othi "UNyana woBawo weZizwe", wakhutshwa. Olu luhlu lube ngomnye umzamo wokujonga ...
I-Moscow, Ithiyetha eyahlukeneyo: iposta, amatikiti, iifoto kunye nokuphononongwa
IMoscow iyalithanda eli nqanaba. Ezahlukeneyo Theatre kwiminyaka yobukho bayo inike inani elikhulu leentlanganiso ezinomdla kubahlali nakwiindwendwe zekomkhulu. Amaqonga emidlalo yeqonga kunye namaqela edwala enza kwinqanaba lawo, ...
ULyudmila Zorina: i-biography kunye nobomi bodwa be-actress (isithombe)
I-Biography kaLyudmila Zorina iqala kwiminyaka yangaphambi kwemfazwe. Wazalwa kwiinyanga ezimbini ngaphambi kokuqala kweMfazwe Enkulu yePatriotic, ngoMeyi 1, 1941, kwisixeko esinegama elihle laseSaratov. Ukususela ebutsheni bakhe, intombazana ...
Ngumbala omninzi umbala wegolide odibeneyo: iimpawu, iingcamango nezindululo
Igolide ithathwa ngokufanelekileyo njengenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwiplanethi yethu. Ifumana i-oxidation encinci kwaye ukukhanya kwayo kuphantse kube ngonaphakade. Ke ngoko, ubunewunewu obunjalo bunokufikelela ...
Yiyiphi imisebenzi uMarshak S. Ya ebhala ebomini bakhe?
Igama likaMarshak Samuil Yakovlevich laziwa kwihlabathi liphela. Isizukulwana esingaphezulu kwesinye sikhule ngomsebenzi omangalisayo wombhali. Ngokusisiseko wonke umntu uyazi ukuba uMarshak njengombhali wabantwana, kodwa uSamuel Yakovlevich wayesekhona ...
UFazu Aliyeva: I-biography yokugqibela yeyona mbongi iphambili kule nkulungwane yamashumi amabini
Ngosuku lokuqala lwe-2016 entsha, u-Avar omkhulu kunye nembongi yaseSoviet kunye nombhali enegama elingaqhelekanga nelingaqhelekanga lamaSlav - uFazu Aliyev - wasweleka. I-biografi yalo mfazi ubalaseleyo ukhonza ...
Yintoni iLivo? Intsingiselo yeligama "ilivo"
Kukangaphi sisiva namhlanje amazwi antsonkothileyo kunye namabinzana afana "nokuzalwa kwentsomi", ngaphandle kokucinga ukuba liyintoni ilivo, enyanisweni. Ukuba sibuyela kwimithombo ephambili, igama elithi legenda livela kulwimi lwesiLatin. Ke ...
Ibali eliyimfihlakalo "U-Queen of Spades". Umxholo webali, abalinganiswa abaphambili
Imincili kunye nokunyoluka, umnqweno wokukhohlisa ikamva, ukunyukela kwiincopho ezingafikelelekiyo kwelinye - - le yiminqweno yomntu ophambili ebalini - injineli uHerman. Emva kwexesha uDostoevsky uza kubonisa olu thando luvutha eluthuthwini lomntu, ngakumbi ...
Abazalwana baseStrugatsky "Kid": isishwankathelo kunye neengxaki zomsebenzi
"Umntwana" libali lokwenyani lika-Arkady noBoris Strugatsky, omnye wemisebenzi yeembonakalo yababhali baseSoviet. Yapapashwa ngo-1971 kwiphephancwadi i-Aurora. Yeyiphi imbono eyabekwa ...
Isimo sengqondo sePechorin
"IHero yeXesha lethu" yinoveli yokuqala yezengqondo kwilizwe lethu, apho uLermontov, ngokuhlalutya amanyathelo kunye neengcinga zomntu ophambili, etyhila ilizwe lakhe langaphakathi kubafundi bakhe. Kodwa ngaphandle koku, ...
Page 1 Page 2 ... Page 165 Okulandelayo Page